ChooseBoard: fomba mora kokoa hanodinana fitendry (Cydia) | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo zava-baovao lehibe indrindra amin'ny iOS 8 ny mifanentana amin'ny kitendry antoko fahatelo, Midika izany fa ny mpamorona dia afaka mamorona fitendry izay azon'ny mpampiasa sintonina avy eo sy ampiasaina ho azy. Ity fampiasa ity dia nanao keyboard toy ny Fleksy, Swype, Minuum, Popkey na Swiftkey tonga ao amin'ny App Store ho an'ny mpampiasa hametraka sy hanolo ny keyboard iOS 8 teratany (izay mbola tsy dia matanjaka loatra) amin'ireo hafa mahafeno ny filan'izy ireo: GIF, sliding, bebe kokoa autocorrect mahery ... Raha manana kitendry maromaro namboarina ianao, ChooseBoard no tweak anao, satria mamela antsika hiovaova eo amin'ny kitendry isan-karazany mora foana ity fomba telo samy hafa fitendry.
Ovay ny klavier araka izay tianao amin'ny ChooseBoard
Voalohany indrindra dia mila milaza izany aminao aho ChooseBoard Izy io dia novolavolain'i Douglas Soares sy CPDigitalDarkroom. Ankoatr'izay, ny tweak dia voatahiry ao amin'ny repository BigBoss ary mitentina $ 1.99, izay mendrika ny fandaniana raha mampiasa fitendry marobe ianao.
Rehefa miditra ny fikirakirana fanovana isika amin'ny voalohany dia tsy maintsy aloha, ampandehananay azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra: «Afaka». Manaraka, tsindrio eo Kitendry, ary ho hitantsika daholo ireo kitendry (na antoko fahatelo na tera-tany) izay namboarintsika / napetraka tao amin'ny iDevice niaraka tamin'ny iOS 8 (na taty aoriana). Tsy maintsy ampandehano daholo ireo kitendry izay tianay hampiasaina amin'ny ChooseBoard. Raha ny amiko dia manana kitendry efatra aho: Emoji, zanaky ny iOS 8, Swype ary SwiftKey; navadika daholo.
Avy eo dia nankany izahay lamaody ary eto isika dia manana maody telo samihafa azontsika isafidianana: Haingana, miafina ary azo ampiharina. Ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo dia ny fahafahantsika mifamadika amin'ireo kitendry. Mampiasa ny mailaka aho.
Ho fanampin'ireo toe-javatra rehetra ireo dia afaka mamonjy fihetsika Activator ihany koa isika hanovana ny fanetsehana na fanalana ny fanarenana mandeha ho azy, ny fanovana fitendry ary ny fanovana maody.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » ChooseBoard: fomba mora kokoa hanodinana fitendry (Cydia)
Ahoana ny fomba famonjana ny iOS 8.2 beta 2